Musharax Farmaajo oo war ka soo saaray weerarkii Hotel Dayax ee magaalada Muqdisho. – Radio Daljir
Musharax Farmaajo oo war ka soo saaray weerarkii Hotel Dayax ee magaalada Muqdisho.
Janaayo 25, 2017 11:44 b 0
Waxaan tiiraanyada la qeybsanayaa shacabka Soomaaliyeed oo idil, gaar ahaan ehelada iyo qoysaska dadkii saaka ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxyadii bahalnimada ahaa ee ay kooxda argagixisada ah ee Al Shabaab ku weerartay Dayax Hotel.
Runtii waa nasiib darro in dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan in maalin walba horteenna lagu laayo. Waxaa la joogaa waqtigii laamaha amniga iyo shacabku ay iska kaashan lahaayeen sidii kooxdan loo dabargoyn lahaa.
Marka ay timaado dhacdo sidan oo kale u xanuun badan waxaa loo baahanyahay inaan meel iska dhigno kala duwanaashaha dhanka ra’yiga ah oo aan meel uga soo wada jeesanno sidii amni xumada looga gudbi lahaa. Taasi waxay ku imaan kartaa in uu iskaashi buuxo dhex maro shacabka iyo laamaha amniga
Waxaan Alle Subxaanahu Watacaalaa ka baryayaa in uu Jannatul Firdaws ku abaal mariyo dadka qiimaha badan ee naga baxay, caafimaad degdeg ahna uu siiyo kuwa dhaawacyada qabo.